Boky mirakitra tononkalo : hamoaka ny « Hafatra » Rasamy | NewsMada
Boky mirakitra tononkalo : hamoaka ny « Hafatra » Rasamy
« Ny aingam-panahiko, avy amin’ny fiainana andavanandro iainako sy hitako ary mitranga anaty fiarahamonina », hoy Rasamy… Tsy nijanona hatreo anefa izy fa nandrakitra izany anaty boky, izay hivoaka afaka andro vitsy.
Rasamison Andriarimanana Aimé, fantatra amin’ny anarana hoe Rasamy, amin’ny maha mpanoratra azy. Nampahafantarina, omaly, fa amin’ny alahady 14 janoary izao manomboka amin’ny 2 ora sy sasany ao amin’ny FJKM Ambohidrabiby Avaradrano, no hamoahana ny « Hafatra », boky voalohany mirakitra ny sanganasan’ity mpanoratra sady mpampianatra mpikaroka eny amin’ny ambaratonga ambony ity. Hiompana kokoa amin’ny fanehoana ny zavakanto malagasy ny fandaharam-potoana amin’io alahady io. Antsa tononkalo miaraka amin-dRasamy, fitendrena valiha, gitara, sodina, sns.
« Hafatra », boky 90 pejy mirakitra tononkalo 72. Asa sora-dRasamy nanomboka teo amin’ny taona 2015. « Efa ela aho no nanomboka nanoratra, saingy betsaka ny tononkalo nosoratako talohan’ireo no very satria tsy voarakitra anaty boky tahaka izao », hoy Rasamy.
Amin’ny maha hafatra azy, maro ireo lohahevitra ampitain’ny mpanoratra amin’ireo asa sorany ireo. Anisan’izany ny zava-miseho eny anivon’ny fiarahamonina, ny resa-politika, ny tontolon’ny fitiavana amin’ny endriny maro (olon-droa, ray aman-dreny sy zanaka, tanindrazana…), sns. Ao ihany koa ny tononkalo natao hampihomehy. « Miezaka manatona ny fon’ny tanora mba ho tia tononkalo ihany koa aho », hoy Rasamy. Anisan’izany ny fampiasana ny fomba fitenin’izy ireny.
Ankoatra ny asany andavanandro sy ny fanoratana tononkalo, manoratra amin’ny blaogy ihany koa Rasamy. « Blog de Rasamy » amin’ny teny vahiny, « Rediredin-dRasamy amin’ny teny malagasy ». Nanao ny teny fanolorana ny « Hafatra » ny mpitandrina Randrianalidera Radoniriana Robin, izay nanantitrantitra fa « … Talenta mitondra hafatra mafonja ny an’ny mpanoratra… Aleo ianao no hianoka ny soa sy ny tsara… Manàna fotoana hitsakotsakoana sy hitelemana ny hafatra isan-tonony ».